Shina 6 amin'ny 1 Type-C HUB, HDMI, USB3.0, Type-C PD 100w, RJ45 (Tohanana tambajotra tariby 1000MB) mpanamboatra sy mpamatsy |Wellink
6 in 1 Type-C HUB, HDMI, USB3.0, Type-C PD 100w, RJ45 (Manohana tambajotra tariby 1000MB)
Modely : OS-KZ006H
PD100w dia mamaly rehefa miasa tsy misy herinaratra.5Gbps fandefasana angon-drakitra haingam-pandeha;Fifandraisana avo lenta 4K amin'ny fitaovana fampisehoana isan-karazany;aluminium firaka akorandriaka, wear-mahatohitra;RJ45 (Tohanana tambajotra tariby 1000MB);OTG fanitarana asa, manitatra ny vaovao mety ho an'ny finday;totozy ivelany, fitendry, karatra tambajotra hilalao lalao.
HDMI 4K@30Hz，USB 3.0*2, Type-C PD 100w Enter, RJ45(Tohanana tambajotra tariby 1000MB)
• Mifanaraka amin'ny 6 amin'ny 1 Multiport Design Ity USB C Hub ity dia manitatra seranan-tsambo usb c mankany amin'ny 4K@ 30Hz HDMI output, seranana 2 USB 3.0, slot karatra SD/ microSD/TF, ary seranana vehivavy USB C.USB C Adapter dia mety amin'ny Macbook Pro/Air, iPad Pro, XPS, Laptop, Smart Phone, sns. Ary mifanaraka amin'ny Windows 10/ 7/ 8/ XP/Mac OS/iPad OS/ Linux/ Android.
• Ultra HD 4K@30Hz HDMI Output Ny seranan-tsambo HDMI amin'ny Type C Hub dia manana 4K UHD (hatramin'ny 3840x2160@30Hz) famoahana horonan-tsarimihetsika, fitaratra na manitatra ny efijery anao amin'ny HDTV, monitor na projector.Mety tsara ny mandefa sarimihetsika 3D amin'ny HDTV-nao;manitatra lalao video eo amin'ny monitor-nao na asehoy ny Chart-nao amin'ny alalan'ny projectors ho an'ny fivoriana birao.
• Fifindran'ny Data Haingam-pandeha Haingana USB 3.0 seranana Mamindra angona ao anatin'ny segondra amin'ny hafainganam-pandeha hatramin'ny 5Gbps, midina mifanaraka amin'ny USB 2.0 sy ambany, ary manohana flash drive, kitendry, mpanonta ary maro hafa.USB HUB koa dia manohana karatra SD/TF hatramin'ny 104Mbps, ka mahatonga azy io ho mpamaky karatra mety indrindra amin'ny fandefasana sary na horonan-tsary.
• Hyper-Speed ​​​​100W Safe PD Charging USB C Adapter dia mampiasa protocole PD (Power Delivery), manohana ny fiampangana haingana hatramin'ny 100W, mahatonga ny fitaovanao hahatratra ny fiampangana haingana.Fanampin'izany, ny adaptatera macbook pro dia manohana ny fiarovana amin'ny circuit fohy, ny fiarovana amin'izao fotoana izao, ny fiarovana amin'ny voly be loatra ary ny fiarovana amin'ny hafanana be loatra, mba hahafahanao mampiasa izany amin'ny fiadanan-tsaina.
• Portable, Anti-Overheat, Plug & Play Ny USB C Dock dia azo entina sy malefaka, miaraka amin'ny haben'ny 11.5 * 3 * 1cm ary ny lanjany 44.8g ihany, Mora apetraka ao amin'ny tanany, kitapo na paosy.Ny akorandriaka firaka aluminium avo lenta dia matanjaka sy maharitra, ary misoroka ny hafanana be loatra.Plug & Play, tsy mila rindrambaiko na fiara.
teo aloha: 6 in 1 Type-C HUB, HDMI, USB3.0, Type-C PD 100w, slot karatra SD/TF (azo vakiana miaraka)
Manaraka: 7 in 1 Type-C HUB, HDMI, USB3.0, Type-C PD 100w, SD & TF, Audio 3.5mm